မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): September 2008
တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးများလာမှုကြောင့် မြန်မ...
အဲန်အယ်လ်ဒီ အနှစ် (၂၀) ပြည့် အဖွဲ့ဝင်တချို့ အဖမ်းခ...
ဗုံးသတင်းကြောင့် အစိုးရထုတ် သတင်းစာတွေ အရောင်းသွက်...
သံဃာတော်များအားရိုက်နှက်ကာ ပစ္စည်းလုခဲ့ရာတွင် ခမရ (...
ရွှေဝါရောင် (၁) နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား ကျင်းပ
မြို့တော်ခန်းမအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှု စစ်ဆေးမှုများလုပ်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲချုပ်ဝင်များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အတွေ့အကြုံ သံဃာတော်များ တင်ြ...
သံဃာတော်တွေအပေါ် နှိပ်ကွပ်မှုကို အရေးယူရန် အမေရိကန် ...
မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ ယောက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟေုာင်း စမတ်ကို ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ...
ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်ကို ထောင်ထဲ ပြန်ထည့်သွားပြန်
ထောင်တွင်း အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသူ လူငယ် ဆေးရုံပို့ရ
ဗုံးကြောင့် လူ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ၍ ဆေးရုံရောက်လာဟု အရေးေ...
ဦးဝင်းတင်အား အန်အယ်လ်ဒီက ပါတီတာဝန် ဆက်ပေးမည် အန်...
အိမ်မှာ ကား(၂၇)စီးသုံးနေသည့်ဝန်ကြီးကို အခြားဌာနမှ ...
အနှစ် (၂၀) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝ...
သတိကြီးစေလို- - -
ကျွန်တော်တို့ (န.အ.ဖ)အားအတိုက်အခံပြုလုပ်နေကြသော ဆိုက်ဘာအတိုက်အခံသမားများ များစွာရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်(န.အ.ဖ)မှလည်းထိုသို့သောဆိုက်ဘာအတိုက်အခံသမားများ၏ဘလော့များ၊ ၀ဘ်ဆိုဒ်များအား ဖျက်ဆီး
ခြင်းမပြုနိုင်စေရန်အတွက်ကျွန်တော့်အနေဖြင့်ဆောဖ့်ဝဲလ်လေးတစ်ခုအား run စေချင်ပါသည်။ ၄င်းဆောဖ့်ဝဲလ်အား
သံဃာတော်တွေကိုပြန်မလွှတ်ပေးလျှင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုပြန်စမည်ဟု စစ်တေ
ဘူးသီးတောင်မှာထောင်ဒဏ်(၇)နှစ်ခွဲကျခံနေရတဲ့စစ်တွေမြို့စိတ္တသုခကျောင်းတိုက်ကသက်တော် (28) နှစ် အရွယ်အရှင်က္ကသရိယအပါအ၀င်စက်တင်ဘာသံဃာ့အရေးအခင်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သံဃာ တော်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်တွေမြို့သံဃာ့အဖွဲ့ချုပ်ကဒီနေ့တောင်းဆိုပါ တယ်။
ဦးဆောင်ကိုယ်တော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အရှင်ရက္ခပုတ္တက တကယ်လို့များဦးဇင်းတို့ကြေငြာချက်မှာပါတဲ့ဒီတောင်း ဆိုချက်ကိုသာမလိုက်လျောဘူးဆိုရင်စစ်တွေသံဃာ့အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဒီရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို အခြေခံပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့သံဃာအရှင်သူမြတ်တွေ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သံဃာတော်တွေနဲ့ အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
စနေနေ့က စစ်တွေမြို့သံဃာအပါး(၁၀၀)ကျော်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာဟာစက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော် လှန်ရေးကိုမမေ့နိုင်ကြောင်းပြသတာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းအရှင်ရက္ခပုတ္တကမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့တည်းကစပြီးစစ်တွေမြို့ကဘုန်းကြီးကျောင်းတွေအားလုံးညနေဘုရားဝတ်တက် ချိန်မှာမနှစ်သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုမှာကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူတွေအတွက်မေတ္တာပို့သမှုကို ဒီနှစ်ကုန်အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း အရှင်ရက္ခပုတ္တကတိုက်တွန်းပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တကာ၊တကာမတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့က ဘာတွေမှာချင်သလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်စားမိမိ ကိုးကွယ်ရာ၊အားထားရာ၊မှီခိုရာ၊ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံကုလသမဂ္ဂဆိုတာတွေကိုမျှော်ကိုးမနေပါနဲ့ကိုယ့်အရေးကိုသာကိုယ်တောင်းဆိုကြပါ။
ဦးဇင်းတို့ရဲ့အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာဟာဒီမိစ္ဆာဝါဒရဲ့အောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားရတော့မှာလား။ဦးဇင်းတို့ရဲ့ ဒီမျိုးဆက်ကသာကိုယ့်မှာကျရောက်နေတဲ့တာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်ဘူး။မကျေပွန်ဘူးဆိုရင်အမျိုး၊ဘာသာ၊ သာသနာဟာကွယ်ပျောက်ရပါတော့မယ်ဆိုတာကိုဒီကနေအလေးအနက်ပြောကြားချင်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲဟာမကြာခင်စတင်တော့မယ်ဆိုတာလည်းဒီကနေတစ်နိုင်ငံလုံးကိုပြောကြားပါရစေ။
နောက်ထပ်သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းစစ်အစိုးရဘက်ကအချိန်မရွေးမကြမ်းဖက်လာနိုင်ပေမယ့်ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုကိုယ်သိပြီးတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဟာလက်တကမ်းမှာရှိတယ်လို့ အရှင်ရက္ခပုတ္တရကဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ်။
ဦးဇင်းတို့သာသနာ့ဘောင်အတွင်းမှာနေတယ်ဆိုတာဘုရားချမှတ်ပေးထားတဲ့အမှန်တရားလမ်းစဉ်အတိုင်း နေရတာ။မဟုတ်မတရားတဲ့တရားတွေထွန်းကားနေမယ်ဆိုရင်သာသနာရေးတည်တံ့မှာမဟုတ်ဘူး။သာသနာ ဆိုတာကမဟုတ်၊မတရားတဲ့အဓမ္မ၀ါဒမဟုတ်ဘူး။မှန်ကန်တိကျတဲ့ဗုဒ္ဓ၀ါဒဖြစ်တယ်။မမှန်ကန်၊မတိကျတဲ့အရာ တွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလွှမ်းမယ်ဆိုရင်အသက်ပေးကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေရဲ့တာဝန် ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကခြောက်တယ်။ ဖမ်းတယ်၊ဆီးတယ်၊အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကရင်ဆိုင် ဖို့အသင့်ပဲဖြစ်နေတယ်။
Posted by Sanghaalliance at 8:18 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရင်ကထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့အပေါ်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေ ဒေသခံပြည်သူများ ထိခိုက်နစ်နာမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာမှာကို စိုးရိမ်ရတယ်လို့ EarthRights International(ERI) က ပြောပါတယ်။ ERI ရဲ့ ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ စစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့
တရုတ်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီပေါင်း အနည်းဆုံး ၆၉ ခုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ သတ္တုမိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြပြီးအရင်နှစ်တွေကထက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာပိုမိုများပြားလာတယ်လို့ ERI စစ်တမ်းမှာ ထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒီလို တရုတ်နိုင်ငံဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကသဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကိုအသုံးချထုတ်ယူနေပေမယ့် အခြား ဘေးထွက်ကိစ္စတွေကို အသေအချာ ကိုင်တွယ်မှုမရှိတာကြောင့် ဒေသခံပြည်သူတွေကို ထိခိုက်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုတွေအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ ERI အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ကစောဝါးက ပြောပါတယ်။
"လာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝဂရုစိုက်မှုမရှိဘူး။ပြည်သူပြည်သားတွေ ဘာတွေထိခိုက်မယ်ဆိုတာလေ့လာမှုမရှိဘူး။သူတို့လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာအင်မတန်သတိထားဖို့ကောင်းတယ် ဆိုတာတော့ကျနော့်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်။ကျနော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့သယံဇာတတွေကအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံက ယူချင်သလိုယူ၊ သုံးချင်သလိုသုံး၊ လုပ်ချင်သလိုလုပ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့က စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကြည့်နေရတဲ့အပေါ်မှာ ဒီအစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။"
အခု ကိုကစောဝါးတို့ တွေ့ရတဲ့အထဲမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘယ်လိုဒေသတွေမှာအများဆုံးလဲ။
"မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းတွေမှာတော့ များတာသေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ရွှေဂက်စ်ပိုက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့စိုးရိမ်တာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ အများကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်ပြီး တွက်လို့ရပါတယ်။"
အနောက်နိုင်ငံ အစိုးရတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမလုပ်ဖို့ စီးပွားရေးအရ အရေးယူပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုနောက်ပိုင်း ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွေမှာ တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယ အပြိုင်အဆိုင် လုပ်လာကြရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံဘက်က ပိုပြီး အရေးပေးမှု ရနေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံက ရှယ်ဗရွန်ရေနံကုမ္ပဏီကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ရုပ်သိမ်းဖို့ အတော်လေးကို ဖိအားပေးခံနေရပါတယ်။
အခုလို အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေက အရေးယူပိတ်ဆို့မှုကြောင့် အနောက်နိုင်ငံ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေနေရာကို တရုတ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေက ၀င်ယူလာတယ်လို့ကစောဝါးက ပြောပါတယ်။
"အနောက်နိုင်ငံတွေကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အမြတ်ထုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ပိုပြီးလုပ်ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကအနောက်နိုင်ငံတွေကလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင် သူတို့နဲ့ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး သူတို့ကိုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်တယ်လို့ပြောရင် သူတို့အနေနဲ့ အနေအထားတခုမှာ ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ပါသေးတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ သူတို့ကိုဘာပြောပြော၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးတယ်ပဲပြောပြော သူတို့က ဘာမှ မတုံ့ပြန်တဲ့အပြင်ဂရုလည်းမစိုက်ဘူး။"
အနောက်နိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့သလိုပဲ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အခုလိုဖြစ်နေတာတွေကို ဂရုပြုလာစေရေး ဖိအားပေးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း သူတို့ရှာဖွေနေတယ်လို့ ကစောဝါးက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်းတရုတ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်တာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တာ အချက်အလက်တွေကိုတော့စုဆောင်းရရှိဖို့ အတော့်ကို အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းတွေ သံလွင်မြစ်ကြောတလျှောက်မှာ စစ်အစိုးရက စီမံနေရာမှာ ဒါဟာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လို့ ဆိုနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကတော့ ဒါဟာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးထက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်၊ အတင်းအကျပ်နေရပ်ပြောင်းခိုင်းမှု၊ အတင်းအကျပ် လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု စတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုနေပါတယ်။ ဒီရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာနည်းပညာအရရော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရပါ အများစုကတော့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ အခု ERI စစ်တမ်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။
Posted by Sanghaalliance at 9:29 AM0comments
ကျောင်းကား စီစဉ်ပေးခြင်း မရှိသောကြောင့်ဆိုကာ စစ်တွေ နည်းပညာကောလိပ်မှ ကျောင်းသားများသည် တင်္နလာနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက စုပေါင်းလမ်းလျှောက်ကာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ဟု ဒေသခံများ အပြောအရ သိရသည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:21 AM0comments
မန်မာပြည်တွင်းကအချို့သောဆိုင်ဘာကဖီး(သို့)အင်တာနက်ဆိုင်များမှာkeyloggerဟုခေါ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲများ ထည့်သွင်းထားပြီးလာရောက်သုံးစွဲနေသူတွေအထဲမှာမှနိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်သွယ် နေကြတဲ့ပြည်တွင်းမှတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူများအားခြေရာခံနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နေမှုများရှိနေပြီးထိုကဲ့သို့တတ်ကြွ လှုပ်ရှားသူများအားဖမ်းဆီးမိနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ထားတာတွေရှိနေပါသည်။
keyloggerဆိုသည်မှာwindowစတက်စဉ်ကတည်းကစအလုပ်လုပ်နေပါသည်။ပိတ်လိုက်လည်း နောက်ကွယ်မှာ လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ tray icon လည်းပေါ်နေခြင်းမရှိ၍ငှင်းအလုပ်လုပ်နေမှန်း မသိနိုင်တော့ပါ။ ၄င်းမှမိမိ keyboard တွင်ရေးလိုက်သမျှ၊ mouse နဲ့နှိပ်လိုက်သမျှများ အားလုံးအား အချိန်နဲ့တကွ မှတ်ထားပေးနေပါသည် ..။ထိုအခါမိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်သက်ဆိုင်သမျှအားလုံးအားငှင်းဆော့ဖ်ဝဲမှမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်နေ၍ လုံခြုံမှုလုံးဝမရှိနိုင်တော့ပါ။ (All in 1 key-logger သာဆိုပါလျှင် ဓါတ်ပုံများ၊ အသံများနှင့် ဗီဒီယိုများအစရှိသဖြင့် အစစအရာရာအားအတိအကျပင် ၄င်းကမှတ်သားထားပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါသည်။)ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲမျိုးအားကွန်ပျူတာတွင်သွင်းထားပြီးလာရောက်သုံးစွဲသည့်သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားအတိအကျ ထောက်လှမ်းထားနိုင်၍မိမိတို့အနေဖြင့်ဆိုင်ဘာကဖီးသို့မဟုတ်တစ်ပါးသူ၏ကွန်ပျူတာအားသုံးစွဲတော့မည်ဆိုပါက မိမိသုံးစွဲမည့် ကွန်ပျူတာထဲတွင် ငှင်းဆော့ဖ်ဝဲအား ရှိမရှိ အရင်ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အတွက် အလေ့အကျင့် လုပ်ထားပါက အကောင်းဆုံးနှင့်လုံခြုံမှု အနည်းငယ် ပိုမို၍ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားသူတစ်ပါးဆီပါမသွားနိုင်အောင်လုပ်ရမည့် နည်းလမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ .. ။ ပထမဦးစွာ Ctrl+Shift+Esc(or)Ctrl+Alt+Del နဲ့ Task manager ကို ခေါ်လိုက်ပါ ..။Task manager ၀င်းဒိုးတက်လာပါကProcess ဆိုတဲ့ tab ကို နှိပ်ပြီး msdts.exe ဆိုတာကို လိုက်ရှာကြည့် ပါ ။ ရှိနေခဲ့လျှင် ထိုကွန်ပျူတာတွင် keylogger အသုံးပြုထားပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့တွေ့ရှိပြီဆိုလျှင်ငှင်းဖိုင်လ်အား End process ပေးလိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည် ။ထိုသို့endprocessလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ငှင်းလုပ်ဆောင်နေသည့်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီးမိမိလုပ်ကိုင် နေသည်များကိုလဲမှတ်ထားတော့မည်မဟုတ်တော့ပါ။Task Manager ကို အထက်ပါအတိုင်း ကီးသုံးခုနှိပ်တာအပြင် window logo+R နှိတ်ပြီးတတ်လာတဲ့ Run box မှာ taskmgr လို့ရေးပြီး ခေါ်ယူလဲရပ်ါသည်။အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာtask manager မှာရှိနေသော process tab ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေထဲကကိုယ်သုံးမယ့် gtalk လောက်ပဲအိုကေထားပြီး ကျန်တာတွေကို disable သို့မဟုတ် end process ပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ရိုးရိုးယူဆာတွေအနေနှင့် ဘယ်လိုဖိုင်အမျိုးအစားကအချက်အလက်တွေကိုရီကော့လုပ်တာလဲဆိုခြင်းကိုမသိနိုင်၍အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း ၄င်း process tab ထဲတွင်ရှိသမျှဖိုင်လ်များအားလုံးအား end process လုပ်ပြီးမိမိအသုံးပြုမည့်ဖိုင်လ်ကိုပဲ manually ခေါ်သုံးတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။အကယ်၍taskmanagerကိုခေါ်လို့မရခဲ့ပဲadminအခွှင့်အရေးရှိမှရမည်ဆိုလျှင်တော့ထိုသို့သောအင်တာနက်ကဖီး မျိုးကိုရှောင်ဖို့သင့်ပါသည်။စိတ်ချရသည့်နည်းပညာပိုင်းအားနည်းသောအင်တာနက်ဆိုင်ကိုသာသွားရောက်အသုံးပြု စေချင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်နည်းပညာအရအဆင့်အတန်းငှင်းဆိုင်တွင်အသင့်အတင့်မြင့်နေပြီဖြစ်၍ တော်ရုံမဟုတ်တော့ဘူးဟူ၍ယူဆလို့ရနိုင်နေပါသည်။ပြီးနောက်keyloggerတွေထဲမှာပင်လျှင်အွန်လိုင်းဝဘ်ပေ့ဂ်ျမှာ တင်လို့ရသည့် keyloggerနှင့်hardware keyloggerဆိုပြီးရှိနေပါသေးသည်။ ငှင်းတို့အားသုံးစွဲထားသည့် ကွန်ပျုတာမှဆိုလျှင် taskmanager ခေါ်ပြီး end process ပေးလိုက်လျှင်တောင်မရနိုင်တော့ပါ။ ထို့အတွက် အများကြီး သတိထားနိုင်ကာမှ တော်ကာကျမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုပို့စ်လေးကိုရေးပြီးမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုပို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှ့ာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ရက်ကပဲကျွန်တော့်ကိုပြည်တွင်းမှ တတ်ကြွလှုပ်ရှားနေသူမိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှနေ၍ရန်ကုန်ုမြို့တာမွေမြို့နယ်ကျောက်မြောင်းအရပ်တွင်ရှိသော အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတစ်ယောက် ပြည်ပနှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရ၍ဆိုကာအထောက်အထားနှင့်တကွအဖမ်းခံရတယ်ဟုပြောပြခဲ့၍အခြားသောပြည်တွင်းမှတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အနှေနှင့်နည်းပညာပိုင်းအရရှောင်လွှဲလို့ရနိုင်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်အဖြစ်နဲ့တစ်ဘက်တစ်လမ်းကနေအထောက်အကူ ဖြစ်စေချင်လို့ပဲဖြစ်ပါသည်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပြည်တွင်းအဆက်အသွယ်တွေကိုပြောပြရင်းးသူတို့ရဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုကြပါလို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Posted by Sanghaalliance at 8:18 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 9:05 PM0comments
VOA သတင်းဌာနမှ ကိုးကားတင်ပြထားပါသည်။
Posted by Sanghaalliance at 7:38 AM0comments
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး တနှစ်ပြည့်သော အခါသမယတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် သံဃာတော် ၁၅၀ ခန့်က စနေနေ့ နံနက်က လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
Posted by Sanghaalliance at 7:36 AM0comments
ဗုံးသတင်းကြောင့် အစိုးရထုတ် သတင်းစာတွေ အရောင်းသွက်ခဲ့
ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမ အနီး ပေါက်ကွဲခဲ့သည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု သတင်းကြောင့် စစ်အစိုးရထုတ် သတင်းစာများ ယနေ့ နံနက် အစောပိုင်းတွင်ပင် အရောင်းသွက်ခဲ့ရာ သတင်းစာများ ဝယ်မရအောင် ပြတ်လပ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာဘာသာထုတ် အစိုးရထုတ် သတင်းစာ ၂ ခုဖြစ်သည့် မြန်မာ့အလင်း နှင့် ကြေးမုံ သတင်းစာများတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသတင်း ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ရာ လက်ပွေ့ သတင်းစာ ရောင်းသူများနှင့် လမ်းဘေး ဘန်းခင်းဈေး အရောင်းဆိုင်များတွင် နံနက် ၈းဝဝ နာရီအတွင်း သတင်းစာများ ပြတ်လပ်သွားခဲ့ကြောင်း ဈေးသည်တဦးက ယခုလိုပြောသည်။
"လာတဲ့သူတွေက ဗုံးပေါက်တဲ့ သတင်းပါသလား မေးတယ်။ ပါတယ်ပြောတော့ ဘယ်နှယောက် လောက် သေလဲ မေးတော့ မသေပါဘူးလို့ ပြောလိုက်ရော။ ပေးပေးဆိုပြီး ဝယ်ဖတ်တော့တာပါဘဲ" ဟု သူကပြောသည်။
ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်း ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမရှေ့ မဟာဗန္ဓူလ ပန်းခြံအနီး လိုင်းကား မှတ်တိုင်အနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ကြောင့် လူ ၇ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့် သတင်း ပြည်သူအများ စိတ်ဝင်စားခဲ့ရာ ယခုလို ဗုံးပေါက်ကွဲသည့် သတင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့် သတင်းစာများ အရောင်းသွက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြို့တွင်း သတင်းစာ ရောင်းသူတဦးက ယခုလို ဆက်၍ ပြောသည်။
"ကျနော်တို့မှာ အိမ်တွေကို ပို့ဖို့ မနဲ ချန်ထားရတယ်။ အခု တစောင်ကို ၄ဝဝ ကျပ် တောင်းတာတောင် ပေးဝယ်တဲ့ သူတွေ ရှိတယ်" ဟု သူကပြောသည်။
ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ယမန်နေ့မနက် မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ပေါက်ကွဲခဲ့သည့် ဗုံးကြောင့် ပြည်သူ ၇ ဦးအနည်းငယ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပြီး နောက်ထပ် မပေါက်ကွဲသေးသည့် လက်လုပ် ချိန်ကိုက်ဗုံး တလုံးအား အနီးအနား တဝိုက်တွင် ထပ်မံရှာဖွေ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း ၎င်းဗုံးသည် ပေါက်ကွဲမှုအားမှာ ပိုမို ပြင်းထန်နိုင်ကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ယခုလို မြို့တော်ခန်းမ အနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားစဉ် အာဏာပိုင်များက မြို့တွင်း အဓိက လိုင်းကား လမ်းမတချို့ ခေတ္တခဏ ပိတ်ခဲ့သော်လည်း ပြည်သူများ ပုံမှန်သွားလာ နေထိုင်လျက်ရှိကြကာ လုံခြုံရေးအဖြစ် လူစည်ကားသည့် ဈေး၊ လိုင်းကား မှတ်တိုင်များ၊ မီးပွိုင့်များ အနီးတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကြံ့ဖွံ့ အဖွဲ့ဝင်များ၊ စွမ်းအားရှင် အဖွဲ့ဝင်များ တင်ဆောင်ထားသည့် ဒိုင်နာကားများ တွေ့မြင်နေရကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
Posted by Sanghaalliance at 7:35 AM0comments
မြန်မာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး သဘာပတိလုပ်သည့် အစည်းအဝေးတခု၏ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတခုအရ တိုင်းပြည်ကို ဆယ်စုနှစ် ၄ ခုကျော် အုပ်စိုးလာခဲ့သည့် စစ်အစိုးရသည် တိုးပွါးလာနေသော အမေရိကန် ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံတကာ ဖိအားကြောင့် တရုတ်ပြည်နှင့် ပိုမိုနီးစပ်သည့် ဆက်ဆံရေးတရပ်ကို ထူထောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြ ပြောဆိုနေပါသည်။
Posted by Sanghaalliance at 7:33 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 8:36 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:35 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:22 AM 1 comments
သံဃာတော်များအားရိုက်နှက်ကာ ပစ္စည်းလုခဲ့ရာတွင် ခမရ (၇၀၃) ပါဝင်ခဲ့
စစ်အစိုးရက၂၀၀၇ခုနှစ်သံဃာလှုပ်ရှားမှုအားအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ရာတောင်ဥက္ကလာပ၊ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်အား ညအချိန်ဝင်ရောက်စီးနင်း၍ပစ္စည်းများလုယူခဲ့မှုတွင်အမှတ်(၇၀၃)ခြေမြန်တပ်ရင်းလည်းအပါအဝင်ဖြစ်သည်ဟု စစ်ဘက်အရာရှိတဦးက ပြောဆိုလိုက် သည်။
ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့ ညတွင်ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်ဝင်းတံခါးအားဖျက်စီးကာလုံထိန်းနှင့် စစ်တပ်အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့်သံဃာတော်များအားအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးကာဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ အဖိုးတန်ပစ္စည်းအမြောက်အများကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
“ဒုရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးရွှေဝင်းရဲ့အကူရဲဘော်ခင်ဇော်ဦးကကာလတန်ဖိုးသိန်း(၄၀)လောက်ရှိမဲ့ရွှေတွေရသွားတယ်၊ တပ်တောင်ဘက်က မြိုင်သာယာစံပြကျေးရွာမှာ (၁၄) သိန်းတန် ခြံတကွက် ဝယ်လိုက်လို့ ရိပ်မိသွားပြီး ခင်ဇော်ဦးကို စစ်ဆေးလိုက်တာ (၂၃) သိန်းရလိုက် တယ်လို့ သိရတယ်”ဟု အဆိုပါတပ်မတော်အရာရှိက ပြောသည်။
အဆိုပါနေ့ညတွင် အမှတ် (၄) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် စကခ (၄) လက်အောက်ခံ ခမရ(၇၀၃)၊ (၇၀၉) တို့အပြင် အမှတ် (၈) ရဲတပ်ရင်းမှရဲတပ်သား၁၀၀ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီးသံဃာတော်အများအပြားကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး ခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
စစ်အစိုးရက သံဃာလှုပ်ရှားမှုအား စက်တင်ဘာ (၂၄) ရက်နေ့မှစတင်ကာ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲ ခဲ့ပြီးနောက် ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်အား အကြမ်းဖက်စီးနင်းခဲ့ရာ မနက်ဖြန်တွင် တနှစ် ပြည့်မြောက်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စက်တင်ဘာလ(၂၇)ရက်နေ့တွင်လည်းကျောင်းတိုက်အားဖျက်စီးသွားသဖြင့်ဒေါသထွက်နေသော ပြည်သူများ၏ ဆက်လက်ဆန္ဒပြမှုအား အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ရာ တောင်ဥက္ကလာပနေ ဒေသခံပြည်သူ ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
“တပ်သားခင်ဇော်ဦးဆီကရတဲ့ငွေရောဝယ်ထားတဲ့ခြံပါပြန်ရောင်းပြီးတပ်ရင်းမှူးနဲ့ဒုရင်းမှူးတို့ကခွဲယူလိုက်ကြတယ်။ ခု တပ်ရင်းမှူးလုပ်တဲ့ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး စိုးတင့်နိုင်က တောင်ငူ (စရဖ) ကို (G1)စစ်ဦးစီးအရာရှိ (ပ) နဲ့တောင် ရာထူးတိုးပြောင်းသွားပြီ”ဟု အဆိုပါ အမည်မဖော် လိုသူ တပ်မတော်အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုတွင် အဓိက အမိန့်ပေးညွှန်ကြားသူမှာစကခ(၄)မှ(ကြည်း/၁၅၉၂၇)ဗိုလ်မှူးချုပ်မြင့်နောင် (ယခု) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်းအုပ်(ဘုရင့်နောင်) ဖြစ်ပြီး ခမရ (၇၀၃) မှ (ကြည်း/၂၀၈၁၈) ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုးတင့်နိုင်နှင့် (ကြည်း/၂၀၆၁၇) ဗိုလ်မှူးရွှေဝင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်လည်း ရန်ကုန်မြို့နှင့် အခြားမြို့ကြီးများတွင် စက်တင်ဘာသံဃာလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလအတွင်း စစ်အစိုးရက ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရဲ၊လုံထိန်း၊ကြံ့ဖွံ့နှင့်စွမ်းအားရှင်စသည့်အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမည့် အင်အားများကို နေရာအနှံ့ဖြန့်ကျက်ထားပြီး ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပေါ်ပါက နှိမ်နင်းရန် ပြင်ဆင်ထားသည်။
စက်တင်ဘာသံဃာ့လှုပ်ရှားမှု(ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး) (၁) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားသို့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် သံဃာတော်များ၊ ပြည်သူများနှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစု မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းများမှ အင်အား (၇၀) ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။
“အခမ်းအနားကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့မှာ သံဃာ တော်တွေရဲ့ သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့အတွက် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနေ့နဲ့ မြန်မာရဟန်းတော် များနေ့လို့ သတ်မှတ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်းနိုင်ငံ) ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဦးသြဘာသက မိန့်ကြားသည်။
သံဃာတော်များအနေဖြင့် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ခြင်းကို ယခုအချိန်ထိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ထားပြီး အချို့သံဃာတော်အနည်း အကျဉ်းသာ သပိတ်ကံပြန်လှန်ခြင်းရှိကြောင်း အဆိုပါ ဆရာတော်က ဆက်လက်မိန့်သည်။
“ဝိနည်းကံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် အခုချိန်ထိ ဦးဇင်းတို့ မန္တလေး၊ ရန်ကုန် အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေနဲ့ တနိုင်ငံလုံးက ရဟန်းသံဃာတွေဟာ ဒီကံကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဆဲပါ၊ ဒါပေမဲ့ နအဖရဲ့ လာဘ်လာဘကို မျှော်ပြီးတော့ ပြန်လှန်လိုက်တဲ့ သံဃာတွေတော့ ရှိပါတယ်၊ ဒါက အနည်း အကျဉ်းပါ၊ အများဆုံးကတော့ လုံးဝကိုမလှန်ပဲ နေကြတုန်းပါ၊ ဦးဇင်းပြောချင်တာကတော့ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဖနကံကတော့ ဆောင်နေဆဲပါဘဲ”ဟု ပြောသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာရဟန်းသံဃာတော်များသည် ပြည်သူလူထုအရေး၊ နိုင်ငံအရေးကိစ္စများတွင် ပုဂံခေတ်ကတည်း က ရှေ့တန်းမှ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင်လည်း ရှေ့တန်းမှဦးဆောင် ကာ လူထုကို သွန်သင်ဆုံးမ၍ မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးစားသွားကြရန်ကို လည်း ဆက်လက်မိန့်ဆိုသည်။
ထို့အပြင် စစ်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်ခဲ့သည် သာသနာ့တက္ကသိုလ် မန္တလေး မှ သံဃာတော်တပါးက “နအဖကို သိပ်ပြီးကြောက်နေလို့တော့လည်း ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ပိုကြောက်လေ ပိုဆိုးလေဖြစ်မှာဘဲ၊ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်လောက်ဘဲ နှိပ်စက်နှိပ်စက် ရုန်းထွက် တွန်းကန် ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ လှုပ်ရှားကြပါလို့ ဒီကနေ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်”ဟု မိန့်ကြား သည်။
ထို့အပြင် သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်းနိုင်ငံ) အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိပြီး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ် ထူထောင်နိုင်သည်အထိ လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။
ယနေ့သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကို စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် သံဃာနှင့် ပြည်သူများ သွေးမြေကျခဲ့သည်မှာ(၁) နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့သည့် နေ့ဖြစ်သည်။
Posted by Sanghaalliance at 8:55 PM0comments
မြို့တော်ခန်းမအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှု စစ်ဆေးမှုများလုပ်
ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမရှေ့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ အနီး ယမန်နေ့က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူစည်ကားရာ လမ်းဆုံ မီးပွိုင့်၊ ဈေး၊ လိုင်းကား မှတ်တိုင်များတွင် အာဏာပိုင်များမှ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည်။
Posted by Sanghaalliance at 8:54 PM0comments
ထောင်မှလွတ်လာပြီးမှ ပြန်အဖမ်းခံရသည့်ဗိုလ်ကြီး ၀င်းထိန်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကသာထောင်၌ ပြန်လည် အကျဉ်းကျခံနေရသည်ဟုဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်၏မိသားစုက ခေတ်ပြိုင်သို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။ ယမန်နေ့ကထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ခဲ့သည့်ဗိုလ်ကြီး ၀င်းထိန်၏ ဇနီးဖြစ်သူက “အန်တီက မန္တလေးပဲ ရောက်သေးတယ်။ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းရမှာဆိုတော့ လောလောဆယ်တော့ အန်ကယ်လ်က နဂိုနေရာမှာ ပေါ့နော်။ အန်တီတို့ကထောင်ဝင်စာသဘောမျိုးသွားတွေ့တာပဲရှိတယ်။လောလောဆယ်တော့ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့တယ်လို့ ဒါပဲပြောလို့ရသေးတယ်။ အန်တီအချိန်မရလို့ပါ” ဟု ပြောသည်။
ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်သည် စက်တင်ဘာ (၂၃) ရက်က အကျဉ်းသား (၉၀၀,၂) ဦးကို စစ်အစိုးရက ပြန်လွှတ်ပေးရာတွင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်အမတ်များဖြစ်သည့် ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း၊ ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ စသူတို့နှင့်အတူ ပြန်လွတ်လာပြီး နေအိမ်သို့ပြန်မရောက်ခင် ကသာမြို့ရှိ ဧရာ ဟိုတယ်၌ ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်အတွက် ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်ကို အာဏာပိုင်များက ပြန်ဖမ်းသည်ကိုမူ ယခုထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
Posted by Sanghaalliance at 8:43 PM0comments
၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တစည) က အနိုင်ရ ရှိရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း ယင်းပါတီ၏ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ကြီးက စက်တင်ဘာ (၂၄) ရက်ကရှားရှားပါးပါးပြုလုပ်သည့်တစညပါတီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းစာဆရာများက်ို ပြောကြားသည်။
Posted by Sanghaalliance at 8:41 PM0comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲချုပ်ဝင်များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ဘက်သို့ ချီတက်သွား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်ဝင်၃၅ယောက်တို့သည်ယနေ့နံနက် ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ် အချိန်တွင် နေအ်ိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသောပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်ဘက်သို့စတင်သွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
စစ်အစိုးရက ကုက္ကိုင်းလမ်း ပိတ်လိုက်သော်လည်း ချီတက်သွားကြသူများ အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ရှိရာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းထဲကို ၀င်ရောက် သွားနိုင်ခဲ့ကြောင်း အစောပိုင်း သတင်းများအရ သိရသည်။ လူငယ် အယောက် ၂၀ နှင့် လူကြီး ၁၅ ယောက် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
Posted by Sanghaalliance at 1:32 PM0comments
မြန်မာစစ်အစိုးရရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့၂၀၀၇ခုနှစ်စက်တင်ဘာသံဃာတော်တွေရဲ့ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှား မှုဟာ အခုဆိုရင် တနှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တွေ အပါအ၀င် သံဃာတော်နဲ့ သီလရှင် ရာနဲ့ချီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်သလို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ သံဃာတော်တွေလည်း ရှိနေဆဲပါ။
ဒီလိုလွတ်မြောက်လာတဲ့အထဲကသံဃာတော်တချို့ရဲ့ကြားနာပွဲကိုနယူးယောက်ခ်မြို့ကနယူးယောက်ခ်ပလာဇာမှာ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားနာပွဲကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် သတင်းယူခဲ့တဲ့ မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ အရင် ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ပါမောက္ခ ပေါ်လို ဆာဂျီယို ပင်ညဲရိုး (Paulo Sergio)က သဘာပတိအဖြစ် ဆွေးနွေးပွဲကို ကြီးမှူးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀ ရာစုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ လှုပ်ရှားမှုတွေအမျိုးမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ပေါ်တူဂီ၊ စပိန် စတဲ့ အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေအပြင် အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေရော၊ လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာပါ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့သမိုင်းဝင်မျိုးစေ့တွေကို
ချပေးတာပါ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုးနေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။" လို့ အခမ်းအနားသဘာပတိ ပါမောက္ခ ပင်ညဲရိုး ပြောသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သံဃာတော်တွေ အပါအ၀င် ပြည်သူတရပ်လုံးဟာဖိနှိပ်မှုတွေအောက်မှာဆက်လက်ခံစားနေရဆဲ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးကိုအခုထက်ပို ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အကြောင်းတွေကိုဆရာတော်တွေကတိုက်တွန်းမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဓိကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တွေထဲက တပါးဖြစ်တဲ့ အရှင် ဦးပညာဇောတကအခုလို မိန့်ကြားပါတယ်။
"အဓိကကတော့ လက်ရှိဥပဒေကိစ္စတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးသွားတယ်။ စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ ဟာတွေကို ဦးဇင်းအနေနဲ့ ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။"
ဒီသံဃာတော်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာပြီးဆုံးသွားပါပြီလားလို့မေးကြည့်တော့အရှင်ဦးပညာဇောတကအခုလိုမိန့်ပါတယ်။"သံဃာတော်တွေကတော့ လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ ပြည်သူ့အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပြည်သူဘက်ကရပ်တည်ပြီး ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်ကို ပြောဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတာရှိတယ်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိ နအဖစစ်အစိုးရက ရွှေဝါရောင်တနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအဓမ္မ၀င်ရောက်ပြီး စောင့်ရှောက်ကြည့်နေတာတွေ၊ ထိန်းသိမ်းနေတာတွေ၊ လွတ်လပ်စွာ သွားခွင့်လာခွင့်မရတာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ဖို့ အတော်လေး အခက်အခဲ ရှိနေပါတယ်။"ဒီပွဲကနေ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်တဲ့ အကြောင်းလည်းဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။"ကုလသမဂ္ဂညီလာခံလည်းကျင်းပနေတာဖြစ်တယ်။နောက်တချက်ကအခုလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေတွေကို နိုင်ငံတကာက သိရှိခွင့်ရသွားမယ်။ သိရှိခွင့်ရသွားခြင်းအားဖြင့် လက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂကနေပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်နေတာ ထိရောက်မှုမရှိဘူး၊ ဒီ့ထက်ကြီးမားတဲ့၊ ခိုင်မာတဲ့၊ တိကျတဲ့၊ အချိန်ကာလပါတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုပြီဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ပြောခွင့်တွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။အရှင်ပညာဇောတဟာ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုနောက်ပိုင်း မြန်မာစစ်အစိုးရကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကို ၀င်ရောက်စီးနင်းပြီး သံဃာတော်တွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီး ထောင်ချမှုတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လှည့်လည်ပုန်းအောင်းနေခဲ့ရပါတယ်။ လေးလကြာ လှည့်လည်ပုန်းအောင်နေပြီးနောက်ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နိုင်ခဲ့သလိုဒီနှစ်ဇန်န၀ါရီလကမှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့သံဃာတော်တပါးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Sanghaalliance at 12:58 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာမနှစ်ကသံဃာထုလှုပ်ရှားမှု ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက် နှိပ်ကွပ်ခဲ့ရာမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေကို တရားဥပဒေအရအရေး ယူရေး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့အတူ ဆက်လက်ကြိုးပမ်း သွားမယ်လို့ သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ် (Laura Bush) ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းကြတဲ့ လူထုအတွက် မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ကြွချီဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ သံဃာထုကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အကြိုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သမ္မတ ကတော်လော်ရာဘုရ်ှက ကြာသပတေးနေ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့၊ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ သံဃာထုနဲ့ လူထုကို မြန်မာစစ်အစိုးရက သေနတ်နဲ့ပစ် ဖြိုခွင်းခဲ့ရာမှာ ၃၀ ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။
Posted by Sanghaalliance at 12:53 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ ယောက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ခိုလှုံခွင့်ရ
မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်မယ်ဆိုရင် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ ခံရနိုင်တယ်ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ ယောက်ကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ တရားရုံးချုပ်က ဒုက္ခသည်အဖြစ် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလို ခိုလှုံခွင့်ပေးတဲ့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်ရင်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး အရဖိအားပေးနိုင်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ ခိုလှုံခွင့် အသိအမှတ်ပြု ခံရသူတွေကပြောပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီလို ခိုလှုံခွင့်ပေးတဲ့သူတွေထဲက တဦးဖြစ်တဲ့အန်န်အယ်လ်ဒီ (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး-၂ ကိုဇော်မိုးအောင်ကို ဗွီအိုအေက ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ သူက အခုလိုပြောပါ တယ်။
မရတာထက်စာရင် ရတဲ့အခါကျတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အပြင် တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာ့အရေးကို ပိုပြီးတော့ လှုပ်ရှားနိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။"
"ကျနော်တို့ အန်န်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးက ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာစပြီး နိုင်ငံရေးအရဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်လွှာတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ၃ ဦးရရှိတယ်၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ၄ ဦးရရှိပြီးနောက် အခု ၈ ဦး ပြန်လည်ရရှိတာပါ။"
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေထဲက အများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ၁၀ နိုင်ငံထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ၀န်းကျင်ရှိတယ်လို့ တရားဝင်စာရင်းဇယားတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယား စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ကျော်ကလုပ်ငန်း ၃၀ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းမှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများအပြားရှိပါတယ်။ ဒီလို စစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေး ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေပေမယ့်လည်း နိုင်ငံရေးအရ စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးဖို့ ဆက်လက်လှုပ်ရှားခွင့်တွေတော့ ရှိနေသေးတယ်လို့ ကိုဇော်မိုးအောင်က ပြောပါတယ်။
"တောင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုတော့ထောက်ခံအားပေးမှုကအားနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အန်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကို သူတို့တတ်စွမ်းသမျှကူညီအားပေးနေတာတွေ့ရတယ်။ကျနော်တို့ကတော့အခုအချိန်အထိတတ်နိုင်သလောက် ကိုရီးယားအစိုးရကိုသော်လည်းကောင်း၊ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်များကိုသော်လည်းကောင်းအခုအချိန်မြန်မာစစ်အစိုးရ အပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့နေတဲ့အတွက်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းပေးရန်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်နားလည်ထောက်ထားပေး
ရေးမှူး-၂ ကိုဇော်မိုးအောင် ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ VOA သတင်းဌာနမှကိုးကားတင်ပြထားပါသည်။
Posted by Sanghaalliance at 7:55 AM0comments
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟေုာင်း စမတ်ကို ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်ချ
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း စမတ် ဆန်ဒရာဝတ်နှင့် ၎င်း၏အမှုတွဲ ဒူးစစ် စီရီဝန် တို့အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အသရေဖျက်မှုဖြင့် အယူခံတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်စီ ယနေ့ချမှတ်လိုက်သည်။
သို့သော် တရားခံ (၂) ဦးအနေဖြင့် တရားရုံးချုပ်သို့ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း နောက်ဆုံးအယူခံလွှာ တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ဒီတရားခံနှစ်ဦးဟာ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အခန်းမှာ ရှိနေသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေဟာ ပြည်သူတွေအပေါ် သြဇာညောင်းတယ်ဆိုတာလည်းသိလျက်နဲ့ တရားသူကြီးတွေက ပြန်ပြင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးနေတဲ့အကြားက တပါးသူထိခိုက်စေမယ့် အမြင်တွေကို ရုပ်သံကနေတဆင့် အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်” ဟု အယူခံတရားရုံးက စီရင်ချက်အတွင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြသည်။
တရားရုံးက တရားခံများအပေါ် စာနာထောက်ထား၍ သက်သာခွင့် ပေးစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိကြောင်း ဖော်ပြသည်။
မစ္စတာစမတ်နှင့် ဒူးစစ်တို့သည် ရုပ်သံတွေ့ဆုံစကားပြောခန်းမှတဆင့် ဘန်ကောက် ဒု-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း စမတ် ရတ်ချာဖိုးဆစ်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အသရေဖျက်မှုဖြင့် ရာဇ၀တ်မှုတရားရုံးက စီရင်ချက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ၀င်းထိန်ကို ကသာမြို့နယ် အကျဉ်းထောင်မှ လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးမှ ယနေ့နံနက်တွင် ပြန်လည် ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ပြန်လည် ဖမ်းဆီးသွားသည်ကို စုံစမ်းဆဲ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ဦးဝင်းထိန် လွတ်မြောက်လာပြီဆို၍ သူမိသားစုဝင်များပင် သွားရောက် ခေါ်ယူရန် ရန်ကုန်မှ ခရီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ထောင်မှ လွတ်လာပြီးနောက် ဦးဝင်းထိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကသာမြို့နယ်ရှိ တည်းခိုခန်းတခုတွင် တည်းခိုနေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လာရောက် ခေါ်ယူသွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အဖွဲ့ချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
"ကျနော်တို့ အခုနောက်ဆုံး ကြားနေရတာကတော့ ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ ကသာထောင်ကို ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန် ရောက်နေပါတယ်။ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့် ဘယ်လို ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ မသိရသေးပါဘူး" ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံတော်အကျိုးကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ဆိုကာ အကျဉ်းသား ၉၀၀၂ ယောက်ကို စစ်အစိုးရက လွတ်ပေးခဲ့ရာ ဦးဝင်းထိန် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၇ ဦး ပါဝင်ခဲ့သည်။ အခြားသူများမှာ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့်၊ ဦးအောင်စိုးမြင့်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းနှင့် ဦးသိန်းနိုင်တို့ ဖြစ်သည်။
ဦးဝင်းထိန်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုအတွင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သူသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အဖမ်းခံရပြီး နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များကို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံသတင်းများ ပေးပို့သည်ဆိုကာ အစိုးရက စွပ်စွဲ ထောင်ချခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်ကလည်း ကာလတို ချုပ်နှောင်ခံရပြီး စစ်ကြောရေးတွင် ထောက်လှမ်းရေးများ၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်သည် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနအောက်တွင် ငါးနှစ်ကြာ စစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးနောက် တပ်တွင်းမှ အစိုးရ အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုတခုတွင် ပါဝင် ပတ်သက်နေမှုကြောင့် တပ်မှ ထွက်ခဲ့ရသည်။
တပ်တွင်း အမှုထမ်းစဉ်ကလည်း ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်သည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရတင်ဦး၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဖြစ်သည်။ သေဒဏ်ပေးခံရသည့် ဗိုလ်ကြီး အုန်းကျော်မြင့်က နိုင်ငံတော် ပုန်ကန် အာဏာသိမ်းရန် ကြံစည်ခြင်းကို အထက်အာဏာပိုင်များသို့ သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက်သည်ဆိုကာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရတင်ဦးသည် ထောင် ၇ နှစ် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။
အင်းစိန်ထောင်တွင်း ၁၁ ရက်ကြာ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြပြီးနောက် ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်လာရသဖြင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ကိုအောင်ဇော်ဦးကို ထောင်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ကုသထားရသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ တောင်ကြီးမြို့သား လူငယ်ကို နေအိမ် အကျဉ်းကျ ခံနေရသည့် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်ပေးရန် ထောင်အာဏာပိုင်များအား တောင်းဆိုခဲ့ရာ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ လာသည့်အတွက် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသည်။
"ထောင်ဆေးရုံးမှာ တင်လိုက်ရတယ်။ သူ့ကို အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြတဲ့ အတွက် အရင်တပတ်က သူ့ကို သီးသန့်ခွဲထားပြီး အင်းစိန် ခွေးတိုက်မှာ တယောက်ထဲ ထားတယ်။ ဒီနေ့ မနက်မှာ ထောင်ဆေးရုံကို ရောက်သွားတယ်။ သူရဲ့ ကျန်မာရေး အခြေအနေက အားရစရာ မရှိဘူး" ဟု လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် လူငယ်တဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် တရားရုံးတွင် သူ၏ အမှုတွဲများကို ယမန်နေ့က ရုံးထုတ်ခဲ့သည်။
"ရုံးချိန်းမှာ ရောက်မလာဘူး။ ဆန္ဒပြနေတယ်လို့ သတင်းကြားရတယ်။ ရုံးချိန်းကိုတော့ ထွက်မလာတာ နှစ်ပတ်ရှိပြီ" အဆိုပါအမှုကို ခုခံလျှောက်လှဲပေးနေသည့် ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က ပြောသည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်းရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့၍ ကိုအောင်ဇော်ဦး အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုနှင့် မတရားအသင်းများသို့ ဆက်သွယ်မှုတို့ဖြင့် အစိုးရက တရားစွဲဆိုထားသည်။
သူနှင့်အမှုတွဲများဖြစ်သည့် ကိုကျော်ဇင်ဝင်း၊ ကိုကျော်ကျော်၊ကိုနေဇာမျိုးဝင်းနှင့် မကြည်ကြည်ဝါ တို့ကို အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ရုံးချိန်းထပ်မံ ချိန်းဆိုခဲ့သည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:58 PM0comments
ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံအနီး ကြာသပတေး နံနက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် လူအသေအပျောက်မရှိပဲ လူ ၄ ဦးဒဏ်ရာ ရရှိသွားသည်ဟု ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ပြင်ပလူနာဌာနမှ အပြောအရ သိရသည်။
"သေတာတော့ မရှိဘူး။ ဒဏ်ရာရတာ အားလုံးပေါင်း ၄ ယောက်ပဲ၊ နာမည်တွေတော့ မသိဘူး" ဟု ဆေးရုံကြီးမှ တာဝန်ကျ ၀န်ထမ်းတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောပြသည်။ သို့သော် ဖြေဆိုခွင့်မရှိသဖြင့် အသေးစိတ်ဖြေကြားရန် ငြင်းဆန်သွားသည်။
အခင်းဖြစ်ရာနေရာတွင်ရှိနေခဲ့သူ မျက်မြင်သက်သေတဦးက အစောပိုင်းပြောကြားချက်တွင် လူ ၁ ဦးသေပြီး ၃ ဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
သို့သော် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကတော့ ၄ ယောက်စလုံး ဒဏ်ရာသာ ရသည်ဟု ပြောသည်။
ပန်းခြံအနီးရှိ စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်တဦးကတော့ အနည်းဆုံး လူ ၃ ဦး ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
"ပေါက်ကွဲသံကြီး ကြားလိုက်ရတယ် ပြီးတော့ လူတွေတအုံးအုံးနဲ့ သွားကြည့်ကြတာပေါ့။ ကျနော်မြင်တာ ဒဏ်ရာရတဲ့ လူတွေ" ဟု သူက ပြောသည်။
ဒဏ်ရာရသူများတွင် ဈေးရောင်းသူ၊ ကားစောင့်နေသူများပါဝင်ခဲ့သည်။ အခင်း ဖြစ်ပွားရာသို့ ရဲများ ချက်ခြင်းရောက်ရှိလာပြီး ဗန္ဓုလလမ်းကို ပိတ်ဆို့လိုက်သည်။
ကျောက်တံတား ရဲစခန်းသို့ မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ "ပေါက်ကွဲသံကျယ်ကြီး ကြားလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုံး ဟုတ် မဟုတ် မသေချာဘူး။ စုံစမ်းနေတုံးပဲ" ဟု ပြောသွားသည်။
ချိန်ကိုက်ဗုံး အမျိုးအစား ဖြစ်သည်ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာ ရောက်နေသော ရဲတပ်သားတဦးက ပြောသည်။ ထို့အပြင် မပေါက်ကွဲသေးသော ဗုံး ၁ လုံးကိုလည်း ထပ်မံ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု သူက ပြောသည်။
ကက်ဆက်ထဲတွင် ထည့်ထားသော ဗုံးကို ရဲတဦးက ဗုံးမှန်း မသိဘဲ ယူဆောင်လာပြီးမှ ပေါက်ကွဲရန် ၅ မိနစ်အလိုတွင် စနက်တံ ဖြုတ်လိုက်နိုင်ခဲ့သည်ဟု သူက ဆိုသည်။ ဗုံးမှန်းမသိသဖြင့် ရဲများက မပေါက်ကွဲသေးသော ဗုံးကို မြို့တော်ခန်းမထဲအထိ ယူသွားနေစဉ် ဗုံးရှင်းတပ်ဖွဲ့ ရောက်လာ၍ စနက်တံ ဖြုတ်လိုက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
"ငါတို့ သိန်းတရာတန် ဖြစ်သွားတော့မလို့" ဟု ရဲတပ်သားတဦးက ကျန်ရဲများကို ဟာသနှော၍ ပြောသည်။ စစ်အစိုးရ၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တခုတွင် နယ်စပ်အခြေစိုက် ဆန့်ကျင်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ ဗုံးဖောက်ခွဲရန် စီစဉ်သူများက မြို့တော်ခန်းမကို ဖောက်ခွဲနိုင်လျှင် သိန်းတရာပေးမည်ဟု ဆုတော်ငွေ ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
အခင်း ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဝင်းမြင့်နှင့် မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သိန်းလင်းတို့ လာရောက် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသွားသည်။
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်က အမှိုက်များ ဓာတ်တိုင်တတိုင်စာလောက် မြင့်တက်သွားသည်ဟု အနီးနားတွင် ဈေးရောင်းနေခဲ့သူ တဦးက ပြောသည်။
ပန်းခြံရှေ့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်အနီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ မော်တော်ယာဉ် လိုင်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေး ၀န်ထမ်းတဦးကတော့ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ယခုအချိန်ထိ နားအူနေသေးသည်ဟု ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မှလာသော ရိုက်တာ သတင်းတရပ်တွင် လူ ၄ ဦးဒဏ်ရာရကြောင်း ရဲက ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားထားသည်။
"အသေးစားဗုံးလေးလို့ ထင်ရတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဆက်လက် စုံစမ်းဆဲပဲ ရှိသေးတယ်" ဟု ရဲအရာရှိက ရိုက်တာသို့ ပြောသည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:54 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 9:51 PM0comments
ဦးဝင်းတင်အား အန်အယ်လ်ဒီက ပါတီတာဝန် ဆက်ပေးမည် အန်အယ်လ်ဒီကထုတ်ပယ်ထားသူများပါ ပြန်ခေါ်ရန် ဦးဝင်းတင်တိုက်တွန်း
ယမန်နေ့ကအကျဉ်းထောင်မှပြန်လွတ်လာသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော် မတီဝင်သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်အား၎င်း၏ မူလတာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားရန်တာဝန် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(အန်အယ်လ်ဒီ)ပါတီကပြောသည်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးလွင်က“ဒါကရှိပါတယ်။တာဝန်ပေးစရာရှိတယ်။သူ့တာဝန်သူဆက်ပြီး တော့ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ အန်ကယ်တို့မျှော်လင့်တယ်။သူကလည်းသူလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါရှင်းနေပါတယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တယောက်တည်းဘယ်တာဝန်ဘာညာဒါကအရေးမကြီးမပါဘူး။ဒီသဘောထားကအားလုံးကို ကမ်းလှမ်းမယ်။ကျနော်တို့ရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုစုစည်းနိုင်သမျှစုစည်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားရှိရင်အ ကောင်းဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျနော်ဒီသဘောထားကိုကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်”ဟုခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
သို့သော်စစ်အစိုးရ၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်၁၉၉၀ခုကတည်းကဦးဝင်းတင်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးကြည်မောင်နှင့်ဦးတင်ဦးတို့နှင့်အတူပါတီမှထုတ်ထားပြီးဖြစ်၍လက်တွေ့အန်အယ်လ်ဒီပါတီထဲပြန်ဝင် ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရမည်မရမည်ဆိုသည်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေ။
ပါတီဝင်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊မဟုတ်သည်ဖြစ်စေစစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး၊အန်အယ်လ်ဒီပါတီ စုစည်းရေးနှင့်အန်အယ်လ်ဒီကိုဝန်းရံရေးတို့အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၊မောင်ဝံသ၊မောင်စူးစမ်း(ဦးချမ်းအေး)စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုလည်း အန်အယ်လ်ဒီပါတီအနေဖြင့်စုစည်းနိုင်သမျှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စုစည်းကာဆောင်ရွက်နိုင်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဦးဝင်းတင်ကဆက်လက်အကြံပြုပြောကြားသည်။
သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုစစ်အစိုးရကအင်းစိန်ထောင်တွင်း၌(၁၉)နှစ်ကျော်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးမှ ယမန်နေ့ကအကျဉ်းသား(၉,၀၀၀)ကျော်ကိုပြန်လွှတ်ပေးရာတွင်အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နှင့်အတူ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Sanghaalliance at 10:17 PM0comments
အိမ်မှာ ကား(၂၇)စီးသုံးနေသည့်ဝန်ကြီးကို အခြားဌာနမှ ၀န်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းရွှေအရေးယူ
အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စောလွင်ကိုမကြာခင်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်း ရွှေ့ခြင်းသည်စက်မှု(၂)လက်အောက်ခံစက်ရုံများအရှုံးပေါ်နေခြင်းအပြင်ဗိုလ်ချုပ်စောလွင်အိမ်တွင်မိသားစု သုံးကားပေါင်း(၂၇)စီးရှိသည့်အချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုနေပြည်တော်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးသတင်းရပ်ကွက်ကပြော သည်။
အိမ်မှာကား(၂၇)စီးထည်လဲသုံးစီးနေသဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်စောလွင်ကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့အရေးယူပြီးမကြာခင်စက်မှု(၁)၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်း၏နေအိမ်တွင်လည်းကား(၁၇) စီးသုံးနေသည့်အတွက်ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းစိုးရိမ်နေသည်ဟုနေပြည်တော်သတင်းရပ်ကွက်ကပြောသည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:32 PM0comments
တရားရုံးထုတ် စစ်ဆေးခြင်း ခံနေရသော အရှင်ဂမ္ဘီရသည် မလန်းမဆန်း ဖြစ်နေသည်ဟု သူ၏ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတဦးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ရှိန် အပြောအရ သိရသည်။
Posted by Sanghaalliance at 8:31 AM0comments
မြန်မာစစ်အစိုးရကအကျဉ်းသား(၉,၀၀၂)ဦးကို “မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းဖြင့်” ပြန်လည်လွှတ်ပေး လိုက်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် ၎င်းပိုင်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တို့ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူ (၂,၀၀၀) ကျော်ရှိကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့လွှတ်ပေးခြင်းသည်“၎င်းတို့မိသားစုများအတွက်ငဲ့ညှာသောအားဖြင့်” လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းပြမြေပုံအဆင့်ပါ၂၀၁၀ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲ၌တစိတ်တပိုင်း ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်အစိုးရ သတင်းစာများက ဖော်ပြသည်။
ထို့အပြင်စည်းကမ်းနှင့်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်လာသောအကျဉ်းသားများဖြစ်သောကြောင့်လည်းယခုကဲ့သို့ပြန်လွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊နိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်ရေးတွင် တဖက် တလမ်းမှအကျိုးပြုစေမည့်နိုင်ငံသားများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးရန်လည်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ် ကြောင်းဖော်ပြသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရသည်နိုင်ငံအတွင်းထူးခြားသည့်နေ့များ၌ယခုကဲ့သို့အကျဉ်းသားများပြန်လွှတ် ပေးလေ့ရှိသော်လည်းများသောအားဖြင့်ရာဇ၀တ်သားများသာ ဖြစ်သည်။
ယနေ့လွှတ်ပေးခြင်းသည်လည်းသံဃာတော်များမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့မှုအားအကြမ်း ဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့သည့်တနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သောယခုလ(၂၆၊၂၇)ရက်များနီးကပ်လာချိန် နှင့်တိုက်ဆိုင်နေသည်။
Posted by Sanghaalliance at 10:12 PM0comments
ဦးဝင်းတင်နှင့်အတူယနေ့ပြန်လွတ်လာသည့်အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအနက်မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း၊စမ်းချောင်းမဲဆန္ဒနယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်မောင်ဆွေနှင့်တောင်ငူမြို့နယ်မဲဆန္ဒ နယ်အမှတ်(၁)ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်စိုးမြင့်တို့လည်းပါဝင်ကြောင်း အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးညဏ်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
ဦးခင်မောင်ဆွေသည်၁၉၉၄ခုတွင်မြင်းခြံထောင်တွင်ထောင်ဒဏ်(၇)နှစ်ချမှတ်ခြင်းခံရပြီး၂၀၀၁ ခု အောက်တို ဘာတွင် ပြန်လွတ်ရမည့်သူဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့်သည် ၁၉၉၇ ခုတွင် အင်းစိန်ထောင်၌ထောင်ဒဏ်(၇)နှစ်ချမှတ်ခြင်းခံရပြီး၂၀၀၄ခုဒီဇင်ဘာတွင်ပြန်လွတ်ရမည့်သူ ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းသည်အကျယ်ချုပ်ခံနေရသည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်၏ယောက်ဖ တော်သူဖြစ်သည်။၁၉၉၇ခုတွင်အဖမ်းခံရပြီးအင်းစိန်ထောင်၌ထောင်ဒဏ်(၇)နှစ် ချမှတ်ခြင်းခံရ သည်။ ဆက်တိုးသည့်ပြစ်ဒဏ်များအရ၂၀၁၄ခုတွင်မှလွတ်ရမည့်သူဖြစ်သည်။
ဦးအောင်စိုးမြင့်မှာတောင်ငူမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှဖြစ်ပြီး၂၀၀၃ခုတွင်အင်းစိန်ထောင်၌ထောင် ဒဏ်(၇)နှစ်ချမှတ်ခံရသည်။၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်မှ ပြန်လွတ်ရမည့်သူ ဖြစ်သည်။
အနှစ် (၂၀) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်လွတ်ပြီ
အင်းစိန်ထောင်၌ အကျဉ်းကျခံနေရသည်မှာ (၁၉) နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်သည့် ၀ါရင့်သတင်းစာ ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုယနေ့ညနေပိုင်းတွင်စစ်အစိုးရကထောင်မှ ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်သည်ဟု မျက်မြင်သက်သေတဦးက ပြောသည်။
ထောင်မှ လွတ်လွတ်ချင်း ဆရာ ဦးဝင်းတင်ပြောသည့်စကားမှာ “မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရတဲ့အထိကျနော်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်” ဟု ရိုက်တာသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဦးဝင်းတင်၏ အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေ ဦးမောင်မောင်ခင်၏ သားဖြစ်သူက “ဒီနေ့ ညနေ (၄) နာရီခွဲလောက်မှာအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ကျန်းကျန်းမာမာပါပဲ။အိမ်မှာဧည့်သည်တွေရော၊သတင်းထောက်တွေရောအများကြီးပဲဦးဝင်းတင်ကို ၀ိုင်းမေးနေကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယနေ့ထုတ်စစ်အစိုးရပိုင်သတင်းစာများတွင်ကြေညာခဲ့ပြီးဦးဝင်းတင်အပါအ၀င်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ယနေ့ပြန်လွှတ်မည်ဟု ယနေ့နံနက်ပိုင်းကတည်းကသတင်းထွက်နေခဲ့ရာမှညနေပိုင်း၌ဦးဝင်းတင်ပြန်လွတ်မြောက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးဝင်းတင်သည်ဟံသာဝတီသတင်းစာအယ်ဒီတာချုပ်ဟောင်းနှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုဇူလိုင်(၄)ရက်တွင်ဖမ်းဆီးခံရပြီးအလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။လွတ်ရက်စေ့ကာနီး၁၉၉၂မတ်လတွင်ထောင်ဒဏ်(၁၀)
နှစ်ထပ်မံချခံရပြီးထောင်တွင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ထံစာရေးတိုင်ကြားမှုဖြင့်၁၉၉၆မတ်လ၌နောက်ထပ်ထေင် ဒဏ် (၇) နှစ် ထပ်ဆင့် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
အသက်(၇၉)နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့်ဦးဝင်းတင်သည် အကျဉ်းထောင်တွင်း၌ သွေးတိုး၊နှလုံး၊ ဆီးချိုနှင့် အရိုးကျီးပေါင်းတက် ဝေဒနာများ ခံစားနေရပြီး ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လက ထောင်သက်တမ်း (၁၉) နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ကာသက်တမ်းကျော်လွန်ပြီးဖမ်းဆီးခံထားရသည့်နှစ်ရှည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဖြစ်သည်။
ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောက်လျှောက်ပယ်ချခဲ့သည်။၂၀၀၅ဇူလိုင်လတွင်အာဏာပိုင်များကဦးဝင်းတင်ကိုပြန်လွှတ်ပေးရန်စီစဉ်ခဲ့ပြီး အင်းစိန်ထောင်ဗူးဝသို့ရောက်ရှိပြီးကာမှထောင်မှူးကပြန်ခေါ်ဆောင်ကာပြန်လည်အကျဉ်းချထားခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်အတွက်ဦးဝင်းတင်၏ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် ၂၀၀၁ ခုတွင် ယူနက်စကိုကကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆု၊ကမ္ဘာ့သတင်းစာများအသင်းက လွတ်လပ်ခွင့် ရွှေကလောင်ဆုနှင့် ၂၀၀၆ ခုတွင် နယ်ခြားမဲ့ သတင်းထောက်များအဖွဲ့က သတင်းသမားဆု ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:56 PM0comments
ရန်ကုန်မြို့ရှိလမ်းမများတွင် သံဃာတော် ၄ … ၅ ပါးခန့်သွားလာနေလျှင် အာဏာပိုင်များနှင့် ကြံဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင်များက အချင်းချင်းစကားပြောစက်ဖြင့်ဆက်သွယ်ကာ အဆင့်ဆင့်အသိပေးစောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်ဟု ရန်ကုန်ရှိ သံဃာ အသိုင်းအ၀န်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် သံဃာများဆွမ်းခံထွက်ချိန်နှင့် ဒါယကာ၊ ဒါယကာမများပင့်ဖိတ်သည့် ဆွမ်းသွပ် အလှူပွဲများကို တစုတဝေးတည်းသွားခွင့်မရကြောင်း သိရသည်။
Posted by Sanghaalliance at 10:00 AM0comments
ကျောက်မြောင်းတွင် နိုင်ငံရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ကြည့်သူများ ဖမ်းဆီးခံရ
ယမန်နေ့ညက ကျောက်မြောင်းရှိ အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်တခုတွင် နိုင်ငံရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကြည့်သူများအား ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း မျက်မြင်တဦးက ပြောသည်။
ရဲများက သေနတ်များဖြင့်ချိန်ပြီး ဆိုင်တွင်းသို့ဝင်လာကာ သုံးစွဲသူများကို မတ်တပ်ရပ်ခိုင်း၍ addressbars ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီး ကြည့်သည်ဖြစ်စေမကြည့်သည်ဖြစ်စေ ထိုဘားအတွင်းတွင် နိုင်ငံရေး address တွေ့ပါက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်။ (၅) ဦးထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
တလကျော်ကြာ မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် မရခဲ့သည့် မစုစုနွေးသည် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ထောင်အတွင်း ကျွေးမွေးသည့် အစားအစာများကို လက်မခံ ငြင်းပယ် ဆန္ဒပြနေကြောင်း မစုစုနွေး အမဖြစ်သူ မဌေးဌေးကြည် မှ မဇ္ဈိမကို ယခုလိုပြောသည်။"ရှေ့နေနဲ့ စကားပါးလိုက်တယ်။ အမနဲ့ မတွေ့ရမချင်း လက်မခံဘူးလို့ ပြောတယ်။ ကျမနဲ့ မိသားစုကို ပေးမတွေ့တဲ့အပြင် ကျမမှာလဲ ဘာအပြစ်မှ မရှိဘူး။ အဲဒါတွေကို မရလို့ဆိုပြီး သူ (စုစုနွေး) က ရေနွေးတောင် လက်မခံဘူး ပြောတယ်။ ကျမနဲ့ မတွေ့တာက ကြာပြီ။ ဒီနေ့အထိဘဲ။ ဆေးနဲ့ ပစ္စည်းကို ထောင်ဘူးဝမှာ ပေးထားခဲ့ရတယ်" ဟု မစုစုနွေး၏ အမဖြစ်သူ မဌေးဌေးကြည်က ပြောသည်။အင်းစိန်ထောင် အာဏာပိုင်များထံ မစုစုနွေး နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးရန် အစ်မဖြစ်သူ မဌေးဌေးကြည်မှ တောင်းဆိုစာတင်သွင်းခဲ့သော်လည်း အာဏာပိုင်များမှ တစုံတရာ တုန့်ပြန်ခဲ့ခြင်း မရရှိခဲ့ပေ။ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် တောမတ်စ် အိုဟေး ကွင်တန်နာ မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ မစုစုနွေးလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။လွန်ခဲ့သည့် ဇူလိုင်လအတွင်းက မစုစုနွေးသည် ထောင်ဝန်ထမ်းများနှင့် ထောင်တွင်း တင်းကြပ်မှုကို ဆန့်ကျင် ပြောဆိုခဲ့သည့်အတွက် ထောင်ဝန်ထမ်းများနှင့် စကား အချေအတင် ဖြစ်ခဲ့ရာ ၂ ပတ်ကြာ တိုက်ပိတ်ခံခဲ့ရသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြရိပ်ညို ဟိုတယ်ရှေ့တွင် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး စာတမ်း ချိတ်ဆွဲခဲ့သည့် မစုစုနွေးအား အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်းခဲ့ကာ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို ပျက်ပြားစေရန် လှုံ့ဆော်မှု၊ လူစုလူဝေးတွင် ပါဝင်မှု နှင့် အစိုးရကို အကြည်ညို ပျက်စေမှု စသည့် ပုဒ်မများတပ်ကာ တရားစွဲဆိုထားသည်။လွန်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်တွင် မစုစုနွေးအား တရားရုံးထုတ် အမှုစစ်ဆေးရန် သတ်မှတ်ရက် ဖြစ်သော်လည်း ရုံးထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ ရမန်ရက်သာ ပေးခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ အရေးတော်ပုံကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခံရပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အပေါ် သုံးသပ်ဝေဖန်ချက်တွေ၊ အကြံပြုစဉ်းစားချက်တွေ အတော်များများ ထွက်ပေါ် လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရေးတော်ပုံအတွင်း သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်ပြီး အကြမ်းမဖက်ဘဲ အနုနည်း နဲ့ မေတ္တာပို့ချီတက်ဆန္ဒပြတာကို လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွင်းခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်သူ တွေအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားသူ အတော်များများဆီက အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်း တခုတည်းနဲ့ မ လုံလောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အသံတွေ အဓိက ထွက်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ကကျတော့ အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်း တခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆကို ရှေ့တန်း မတင်ဘဲ သံတမန်ရေးနည်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းအပေါ် အားကိုးအားထားပြုပြီး စိတ်ရှည်လက် ရှည် သည်းခံစောင့်မျှော်ဖို့ စဉ်းစားကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ အဲဒီလို စဉ်းစားသူတွေဆီက နိုင်ငံတကာဖိအားတွေ ပိုမိုပြင်းထန်လာတဲ့အပေါ် အခွင့်အရေးအမိအရယူပြီး စစ်မှန်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဖြစ်ပေါ်လာအောင် အား ထုတ်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာတာကတော့ အကြမ်းမဖက်ရေးနည်း တခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားသူတွေရော၊ သံတမန်ရေးနည်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းတွေကို စောင့်စားသူတွေပါ စက်တင်ဘာ အရေးတော်ပုံတုန်းက လို အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်း တမျိုးတည်းကို ထပ်သုံးလို့ မရတော့ဘူး ဆိုတာကို လက်ခံလာကြတာပဲ ဖြစ် တယ်။ အဲဒီနည်းကို ထပ်သုံးရင် သံဃာတွေ ပြည်သူတွေ ကျောင်းသားတွေ သက်သက်မဲ့ ထပ်အသတ်ခံရပြီး ထပ် မံရှုံးနိမ့်ဦးမယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက် လက်ခံလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နအဖစစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်တိုက် ပွဲဝင်သူမှန်သမျှ အဲဒီနည်းကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးဖို့ မသင့်တော့ဘူးဆိုတာကို တညီတညွတ် လက်ခံလာ ကြတဲ့ သဘောပါပဲ (စက်တင်ဘာအရေးတော်ပုံအတွင်း ရှေ့ဆုံးကနေ ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ အောင် ဝေးကဆိုရင် သူ့ရဲ့ ‘အောင်ဝေးစစ်တမ်း’မှာ အဲဒီနည်းကို ယုံကြည်တဲ့သူရှိသေးရင် ယုံကြည်တဲ့သူတွေ ရှေ့ဆုံး ကချီတက်ပြီး ပိုးစိုးပက်စက် အသေခံကြပါလို့တောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးရေးသားထားတာကို တွေ့ရ ပါတယ်)။
ပထမဦးစွာ အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်း တခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားသူတွေရဲ့ အကြံပြုချက် တွေအပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ကြည့်တဲ့အခါ အောက်ဖော်ပြပါ တိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးအစား အကြံပြုချက်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။
(၁) လက်နက်အားကိုးပြီး ဖက်ဆစ်ဆန်ဆန် ဖိနှိပ်ရက်စက်နေတဲ့ နအဖစစ်အုပ်စုကို လက်နက်ကိုင် တော် လှန်ရေးနည်းနဲ့သာ ချေမှုန်းနိုင်မယ်။ အဲဒီအတွက် စုစည်းညီညွတ်တဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးတပ်နဲ့ အဲဒီတပ်ကို ဦးဆောင်ကွပ်ကဲမှု ပေးနိုင်မယ့် ခေါင်းဆောင်တယောက် အမြန်ဆုံး ပေါ်ထွန်းဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလို ပေါ်ထွန်းလာမယ့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးတပ်ကို နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ မြန်မာနိုင် ငံသားအားလုံးက ငွေကြေးကအစ လိုအပ်တာတွေကို အလုံအလောက် ထောက်ပံ့ပေးမယ်။ ပြည်သူတွေက လည်း နအဖစစ်အုပ်စုကို အရင်ကထက် မုန်းတီးပြီး ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လိုစိတ်တွေ ပြင်းပြနေတဲ့အတွက် တပ် သားစုဆောင်းရတာ လွယ်ကူမယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီး နအဖစစ်အုပ်ကို ဖြုတ်ချမယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို ထူထောင်ရမယ်။
(၂) ရှိရင်းစွဲ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ မြို့တွေပေါ်တက်ပြီး နအဖစစ်အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားကို ရပ်တန့်စေမယ့် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ ပြည်သူတွေကို ထိခိုက်မှုမရှိစေမယ့် ပစ်မှတ်တွေကို သေချာရွေးချယ်ပြီး ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် အသီးသီးမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်တွေက ရဲဌာနတွေ၊ ကြံ့ဖွံ့အသင်းရုံးတွေ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အသင်းရုံးတွေ၊ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်/ မြို့နယ်/ ရပ်ကွက် အေးချမ်းသာယာရေးရုံးတွေ၊ နအဖနဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေ/ အပေါင်းအပါတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးတွေ၊ ကုမ္ပဏီရုံးတွေကို အဓိက ပစ်မှတ်ထား ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အစိုးရယန္တရားအားလုံး လုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားစေဖို့ ရုံးဝန်ထမ်းတွေကို ကြိုတင်အသိပေး ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်ပြီး အစိုးရရုံးဌာန အဆောက်အဦးတွေကို ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်(အဲဒီလို လုပ်ဆောင်ရာမှာ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတာမျိုး၊ အသက်ဆုံးရှုံးတာမျိုး မဖြစ်အောင် သတိကြီးစွာထားပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်)။ အဲဒီကမှတဆင့် အထွေထွေသပိတ်ကို ဖေါ်ဆောင် အရှိန်မြှင့်ပြီး စင်ပြိုင်အစိုးရ ဒါမှမဟုတ် ကြားဖြတ်အစိုးရကို ဖွဲ့စည်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ပြည်သူတွေအားလုံး ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ် ရရာလက်နက်စွဲကိုင်ပြီး နအဖရဲ့ ဖိနှိပ်မှုယန္တရားတွေကို ကျားကန်ပေးနေတဲ့ ကြံဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင်၊ လုံထိန်း၊ ရဲ၊ မြို့ပေါ်နေ တာဝန်ကျ စစ်သား စတဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေ၊ နအဖနဲ့ ပတ်သက် ဆက်နွယ်နေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အမျိုးအဆွေတွေ အားလုံးကို အလစ်အငိုက် တိုက်ခိုက်ပြီး သူတို့ သွေးပျက်တဲ့အချိန်မှာ လူထုတိုက်ပွဲကို ပြန်ဖော်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီကနေ လူထုတိုက်ပွဲ အရှိန်မြင့်လာတဲ့အခါ စင်ပြိုင်အစိုးရ ဒါမှမဟုတ် ကြားဖြတ်အစိုးရကို ဖွဲ့စည်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရရာလက်နက် ဆိုတဲ့နေရာမှာ သေနတ်၊ ဗုံး စတာတွေကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘဲ မိမိတို့မှာရှိတဲ့ အပ်တိုတချောင်းကအစ တုတ်၊ ဓား၊ လေးခွ၊ ဂျင်ဂလိအဆုံး သုံးလို့ရတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယအကုန်လုံးကို ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ စွဲကိုင်အသုံး ပြုပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက နအဖဒေါက်တိုင်(လူပုဂ္ဂိုလ်)တွေအားလုံး သွေးပျက်ခြောက်ခြားပြီး ဖရိုဖရဲ ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေက အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်း တခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားသူတွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အကြမ်းဖျင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်(၁) စဉ်းစားချက်အပေါ် သုံးသပ်ကြည့်ရင် အေဘီ အက်စ်ဒီအက်ဖ်လို ကျောင်းသားတပ်မတော်ရော၊ ကေအန်ယူအပါအ၀င် အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရော ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပစ်ပယ်ပြီး လက် နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့သစ်ကို ထူထောင်ဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ သဘောဆောင်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင် ရင် ရှိရင်းစွဲ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ပေါင်းစည်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့ တော်လှန်ရေးတပ်မတော်ကို ဖွဲ့နိုင်ဖို့ကသာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ၁၉နှစ်ကျော်လုံးလုံး အချိန်ရခဲ့တဲ့အ တွင်းမှာ တစုတစည်းတည်းဖြစ်တဲ့ တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်မတော်ကို မထူထောင်နိုင်ခဲ့တာကို ကြည့် ရင် စုစည်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက် ပေါ်ထွန်းမလာတာဖြစ်နိုင်သလို၊ ဖွဲ့စည်းဖို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေ လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး တစုတစည်းတည်းဖြစ်တဲ့ လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်ကို ဖွဲ့နိုင်ပြီ၊ နအဖ စစ်အုပ်စုကို အောင်ပွဲရတဲ့အထိ တိုက်နိုင်ပြီထားဦး၊ အဲဒီအောင်ပွဲရ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်ကရော ဒီမိုကရေ စီ နိုင်ငံတော်ကို ချောချောချူချူ တည်ထောင်ခွင့် ပေးပါ့မလား၊ ကျူးဘားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ကက်စ် ထရိုလို လုပ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်းဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ ထောက်ပြစဉ်းစားချက်တွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အဲသလို ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါးမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်စရာတွေ ရှိနေမှုကြောင့် နံပါတ်(၁) စဉ်းစားချက်ကို အကြံပြုတဲ့သူက အနည်းစု ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီလို အကြမ်းမဖက်တဲ့ နည်းတခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ ယုံကြည်သူတွေ စဉ်းစားတဲ့ အကြံ ပြုချက် အများစုကတော့ အမှတ်စဉ်(၂)နဲ့ (၃)တွေ ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရေအတွက်အားဖြင့် ဆတူ လောက်ကို တွေ့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ အဲဒီနည်းနာ တခုခုကိုသုံးပြီး လူထုတိုက်ပွဲနဲ့ ချိတ်ဆက် အနိုင် ယူဖို့ အကြံပြုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်(၂) စဉ်းစားချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်ဖို့အတွက်ဆိုရင် လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ တပေါင်းတစည်းတည်း ဖြစ်စရာမလိုဘဲ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း တိုင်တိုင်ပင်ပင် အချိတ်အဆက် ရှိရှိနဲ့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်ရာ မြို့ရွာဒေသတွေကို ၀င်ရောက်ပြီး ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးကြဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ အကြံ ပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရရင်တော့ နံပါတ်(၂)နဲ့ (၃) စဉ်းစားချက် နှစ်ခုစလုံးဟာ နံပါတ်(၁) စဉ်းစားချက်ထက် ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများတယ်လို့ အများစုက သုံးသပ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနည်းနာ နှစ်ခုကနေ လူထုတိုက်ပွဲပေါ်လာတဲ့အခါမှာ မြေပေါ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အချိတ်အဆက်မိမိ လက်တွဲလုပ်ဆောင် ဖို့ အထူးလိုအပ်လှကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြရင်း အကြမ်းမဖက်တဲ့ နည်းတခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ ယုံကြည်သူတွေရဲ့ စဉ်းစားချက်အပိုင်းကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါတယ်။
Posted by Sanghaalliance at 9:35 PM0comments
စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး(၁)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် စာအုပ်အား ဖတ်ရှုလိုပါကအောက်တွင် ဒေါင်းလော့လုပ်ဆောင် နိုင်ပါသည်။
Posted by Sanghaalliance at 7:18 AM0comments
ကျားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တောထဲက Tiger လို့ခေါ်တဲ့ကျားကြီးကိုပြေးမမြင်လိုက်ကြပါနဲ့ဦး။
• D- WAVE
Posted by Sanghaalliance at 10:38 PM0comments
ဦးပညာဇောတ (သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု) | မတ် ၁၃၊ ၂၀၀၈
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်သောအခါ ရဟန်းသံဃာတော်များအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွယ် ပတ်သက်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ နိုင်ငံရေးကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လုပ်ကိုင်တာ မဟုတ်ပေမယ့် နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သည့် ဘုရင်များ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများကို ညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့ပါသည်။ စစ်မဖြစ်အောင် သံတမန် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် သာဓကများ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
ပုဂံ အနော်ရထာ ခေတ်မှသည် မင်းတုန်းနှင့် သီပေါမင်း ခေတ်အထိလည်း မင်းတွေကိုဆုံးမပေးသည်။ နန်းဦး ဆရာတော် များအဖြစ် သာသနာတော်နှင့် ပြည်သူ၊ ပြည်သားများ အကျိုးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၈၈၆ ခု အင်္ဂလိပ်လက်အောက် သူ့ကျွန်ဘ၀ရောက်ခဲ့ရသော်လည်း အမျိုးသားရေးတာဝန်တရပ်အနေဖြင့် သံဃာ တော်များ ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထင်ရှားသည့် သာဓကများမှာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ပြည်ပနိုင်ငံ အသီးသီးသို့ သွားရောက်ပြီးသည့်နောက် မြန်မာပြည်သူများ နိုင်ငံရေး အသိပညာ နိုးကြားတက်ကြွလာအောင် ဟော ပြော လှုံ့ဆော်ခဲ့ ပါသည်။ ထိုဟောပြောမူကြောင့် ကိုအောင်ဆန်း လို မျိုးချစ်လူငယ်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော် ဦးဝိစာရ၏ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြတိုက်ပွဲကလည်း မြန်မာ ပြည်သူများကို နိုင်ငံရေး အသိနိုးထစေပြီး `မမေ့ကြပါနဲ့´ ဆိုသည့် နောက်ဆုံး စကားနဲ့ `လွတ်လပ်ရေး`ကို ရအောင် ယူဆောင်ကြဖို့ ညွန်ကြားပြသခဲ့ပါသည်။
၁၉၄၈ ခု လွတ်လပ်ရေးရပြီးသည့်နောက် ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်သောအခါ အဖွဲ့အစည်းများစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ရာ ရဟန်းပျို သမဂ္ဂကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး ပြည်သူများ၏ အခက်အခဲများအားအစိုးရ သိရှိရန် ဖေါ်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၂ ခု တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရ ဦးနေ၀င်း လက်ထက်တွင် သမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ ဖျက်သိမ်း၍ ဥပဒေထွက် ပေါ်လာသောကြောင့် ၁၉၆၄ ခုတွင် ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် အဖွဲ့အစည်း တရားဝင် ဖွဲ့ စည်းခွင့်မရသော်လည်း ၁၉၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ ခု ဦးသန့်အရေးတော်ပုံ၊ အလုပ်သမား အရေးအခင်းမှိုင်း ရာပြည့် စသော နိုင်ငံရေး လုပ်ရှားမှု မှန်သမျှတို့တွင် ရဟန်းသံဃာများ ရှေးတန်းမှ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၈၈ ခု အရေးတော်ပုံကာလ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားပျက်နေသည့်အချိန် ရဟန်းသံဃာတော်များ၏ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးမှုတို့ကြောင့် ပြည်သူအသက်ပေါင်းများစွာ ချမ်းသာရာ ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက် တွင် စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းပြီးသည့်နောက်ပိုင်း အထက်ဗမာပြည် ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ(မန္တလေး)နှင့် အောက် ဗမာပြည် ရဟန်းပျို သမဂ္ဂ (ရန်ကုန်) တို့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး ပြည်သူ၊ ပြည်သား၊ ကျောင်းသားများနှင့် အတူ စစ်အာဏာရှင်ကို တွန်းလှန် ခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၉၀ ခု ရှစ်လေးလုံး နှစ်နှစ်ပြည့်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ NLD ပါတီဝင်များ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ ပြည်သူလူထုနှင့်အတူ ပူပေါင်းကာ မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ သံဃာတော်များအား ဈေးချိုနှင့် ၂၆ (B) လမ်းတလျှောက် အရုဏ်ဆွမ်းလောင်း လှူခဲ့ပါ သည်။ ယင်းဆွမ်းလောင်းပွဲကို န.၀.တ အာဏာပိုင်များက ကန့်ကွက်တားမြစ်သဖြင့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ဖွား ခဲ့ကြပါသည်။
ထို အဓိကရုဏ်းတွင် သံဃာတော်များစွာ အရိုက်ခံရခြင်း၊ ဒဏ်ရာများ ရရှိခြင်း၊ လာဘ်မရအောင် တားမြစ်ခံရခြင်း စသည့် အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဦးရာဇဓမ္မာဘိဝံသ၊ ဦးကောဝိဒါဘိဝံသ တို့၏ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူကာ အထက် မြန်မာပြည် ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ အနေဖြင့် ၁၉၉၀ ခု စက်တင်ဘာလတွင် မန္တလေးမြို့တောင်ပြင်နှင့် အနောက်ပြင်တို့မှာ သုံးနေရာခွဲပြီး န.၀.တ စစ်အစိုးရကို ပထမအကြိမ် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင် သပိတ်မှောက် ခဲ့ကြပါသည်။
မန္တလေးမြို့ရှိ သံဃာတော်များ ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည့် သပိတ်မှောက်ကံကို ၀ိနည်းတော်လာဒေသနာတော် နှင့်အညီ ဆန္ဒပေး ထောက်ခံသည့် အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ စာသင်တိုက်ကြီးများစွာက ဆရာတော်များ၏ဦးဆောင်မှုကို ခံယူကာ အောက် မြန်မာပြည် ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂအဖွဲ့ကလည်း ၃.၁၀.၁၉၉၀ ခု၊ ၁၃၅၂ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် ငါးထပ်ကြီး ဘုရားရင်ပြင် ပေါ်မှာ န၀တ စစ်တပ်ကို သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ ဦးတိုက်သစ္စာပြု ခဲ့ကြပါသည်။
န၀တ စစ်တပ်သည် သံဃာတော်များ၏ ကံဆောင်မှုကို ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကာ ဦးအံ့မောင် (ညွန်ချုပ် - သာသနာရေး ဦးစီးဌာန) ၏ အကြံပေးချက်ဖြင့် ထိုကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကြီးများ၊ ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် သံဃာ တော်များ၊ စာသင်သား သံဃာတော်များကို အဓမ္မဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သဖြင့် ဦးအာစာရ (သရက်တောကျောင်း၊ သရက်ထောင်)၊ ဦးဇောတိက (ရွှေဘုန်း ပွင့်ကျောင်း ၊ အင်းစိန်ထောင်)တို့လို ပျံလွန် တော်မူသည့် သံဃာတော်များစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။ တချို့မှာ ရဲဘက်စခန်းများသို့လိုက်ပါသွားရသဖြင့် ပျံလွန်သည့် စာရင်း များ ပြုစုရန် ခက်ခဲလျှက်ရှိပါသည်။
န၀တ သို့ ပထမ အကြိမ်သပိတ်မှောက်ကံသည် နှစ်တွေကြာညောင်းပြီး ရဟန်းသံဃာတော်များ ထောင်ချခံလိုက်ရသဖြင့် ကံဖျက်ပြီဟု ထင်ဖွယ်ရာ ရှိသော်လည်း ရဟန်းတော်များ၏ သာသနာ့ အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး စိတ်ဓာတ်မှာ တိုးတက်လာ နေကြောင်းကို ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးက သက်သေပြလျှက် ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီးဆိုသည့် အမည်မဖြစ်ပေါ်မီ ရဟန်းတော်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ခွဲ တွေ အမြောက်အမြား ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့များစွာထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်သည် ရန်ကုန် ရဟန်း ၅ ပါး ၊ မန္တလေးရဟန်း တပါးကို အခြေခံပြီး ဗဟိုအလုပ်အမူဆောင်အဖွဲ့ကို စတင် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ထို့အတူ ပဲခူး၊ ပြည်၊ မကွေး၊ ပခုက္ကူ၊ မော်လမြိုင်နှင့် ရခိုင်ဒေသတို့တွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များအလိုက် အဖွဲ့ အစည်းများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ဦးဂမ္ဘီရနှင့် တခြား ၆ ပါး ဖွဲ့စည်းထားသော ရန်ကုန်တိုင်း ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂအဖွဲ့လည်း သီးခြားရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ သံဃာတော်များကိုအခြေခံပြီး ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
အထက်မြန်မာပြည်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့သာမဂ္ဂီအဖွဲ့ချုပ်ကို မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိသံဃာတော်များကို အခြေခံပြီး ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် စာကြည့်တိုက် စာဖတ်အသင်း ၊ စာပေ ဆွေးနွေးပွဲပုံစံမျိုး ရပ်တည် ထားကြပါသည်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂလို အဖွဲ့တွေ ဆက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာသလို ရဟန်းသမဂ္ဂတွေလည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြပါသည်။ အဖွဲ့အားလုံးရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်မှာ စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေးသာ ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ ကိုယ်စား လှယ်များသည် အဖွဲ့အချင်းချင်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းကာ တိုင်ပင်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမြင်ဖလှယ်ခြင်း၊ အပြန်အလှန် ကူညီချင်း များကို ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် နအဖ အစိုးရရိပ်မိပုံ ပေါ်လာသဖြင့် လူသစ်ရဟန်းများကို စေလွှတ်ပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရ သည်များလည်း ရှိပါသည်။ တခါတရံ ချိန်းဆိုထားပြီးမှ ဖျက်လိုက်ရသည်များလည်း ရှိပါသည်။
၂၀၀၅ ခု နှစ်စပိုင်းလောက်ကစပြီး အာဏာရှင်အား လူထုလူပ်ရှားမှုဖြင့်တိုက်ထုတ်ရမည်ကို သိရှိလာခဲ့ပြီး အချိန်ကျရောက် ပါက အဆင်သင့်ဖြစ်နေရန် မိမိတို့အဖွဲ့အသီးသီးကို အင်အားတိုးချဲ့ရန်နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရန် အဖွဲ့ အားလုံး သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၇ ခု ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နအဖစစ်အစိုးရက စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတိုးမြှင့်လိုက်သောအခါ ပြည်သူများ စားဝတ်နေ ရေး အလွန်ခက်ခဲသွားကြပါသည်။ ယင်းအခက်အခဲကို အကြောင်းပြုပြီး လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေ၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ် လာသော်လည်း ရဲ၊ လုံထိန်း၊ ကြံ့ဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင်များ၏ ဖမ်းဆီးရိုက်နှက် ဖိနှိပ်မှုများကြောင့် ခရီးရောက်သင့်သလောက် မရောက်ဘဲ ရှိနေပါသည်။
ယင်းအခြေအနေများကြောင့် ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် သံဃာတော်များ အနေဖြင့်လည်း ယခင် ကြိုတင် ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်သော ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂများကို အတူတူပူးပေါင်းကာ ကြီးမားသည့်အဖွဲ့အစည်းကြီးတခု ဖွဲ့စည်းရန် ၉. ၉. ၂၀၀၇ တွင် မန္တလေးမြို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတကျောင်း၌ဆုံတွေ့ရန် ကြံစည်ခဲ့ပါသည်။ ရှစ်ရက်နေ့ မန္တလေး မြို့ကို အရောက်သွားရမည်ဖြစ်သဖြင့် လမ်းခရီးတွင်ကိစ္စရှိသူများက လေးရက်နေ့ကတည်းက ကြိုတင်ထွက်ခွာကြ ပါ သည်။
စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ အခြေအနေက လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ ပခုက္ကူမြို့တွင် ရဟန်း သံဃာတော်များ မေတ္တာပို့ ပရိတ်ရွတ်ဆိုကြသည်ကို အာဏာပိုင်များက ကြိုးကွင်းပစ် ဖမ်းဆီးကြောင်း၊ ရိုက်နှက်ခံရကြောင်း၊ ဖုန်းဆက် လာပါသည်။ ညပိုင်းသတင်းတွေမှာလည်း ဆက်တိုက်ပါလာပါသည်။ ခြောက် ရက်နေ့မှာ ကားတွေမီးရှို့ကြောင်း သိရ ပါသည်။
ပခုက္ကူသံဃာများအပေါ် ပြုမှုသည့်လူမဆန်လုပ်ရပ်အား ရဟန်းသံဃာတော်များအနေဖြင့် တုံ့ပြန်ရမည်ကို အားလုံး နားလည်ပြီး ဖြစ်လေသည်။ ကိုးရက်နေ့ စည်းဝေးပွဲလုပ်ရန် သွားကြသောအခါ နေရာပေးမည့်သူက မပေးရဲ ဖြစ်နေသဖြင့် နောက်တနေရာထပ်ရွှေ့ရာ အဆင်ပြေခဲ့ပါသည်။
ရဟန်းတော်များ စတင်ညှိနှိုင်းသောအခါ ပခုက္ကူကိစ္စကို ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ရန် သဘောတူကြပါသည်။ ထို့နောက် သပိတ်စတင်မည့်ရက် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ တောင်းဆိုသင့်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ပါဝင် နိုင်သော အချက်အလက်များကို ညှိနှိုင်းကြရပါသည်။
တောင်းဆိုချက် (၄) ချက်မှာ
(၁) ပခုက္ကူသံဃာတော်များကို (၁၇) ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီ နောက်ဆုံးထား တောင်းပန်ရန်၊
(၂) စက်သုံးဆီနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုများကို လျှော့ချပေးရန်၊
(၃) ဒေါ်စုအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးရန်။
(၄) အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းအမည်ကို“မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာတပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး” ဟု အမည်ပေးပြီး မလိုက်လျောပါက ၁၈ ရက်နေ့မှစတင်ကာ သပိတ်မှောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သော အဖွဲ့များမှာ-
(၁) မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်
(၂) မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့သာမဂ္ဂီ အဖွဲ့ချုပ်
(၃) ရန်ကုန်တိုင်း ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ
(၄) သံဃာ့ဓူတ သမဂ္ဂ တို့ ဖြစ်ပါသည်။
(၆) ဦးဂမ္ဘီရတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရာတွင် ကွန်ပျူတာမရှိသောကြောင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကြေညာချက်များကို လက်ရေးနှင့်ရေးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ ကင်မရာမှတဆင့် အီးမေးလ်ဖြင့် မီဒီယာသို့ ပို့ခဲ့ရပါသည်။
သံဃာတော်များ ဆွမ်းစားသည့်အခါ အင်ဖက်ထဲတွင် အသားဟင်း၊ ငါးပိချက်၊ အစိမ်းကြော်၊ ငရုတ်စိမ်း၊ ကြက်သွန် များရောထည့်ထားသည့် ဖက်ထုပ်ထမင်းကို သုံးဆောင်ဘုဉ်းပေးကြရပါသည်။ သံဃာတော်များ၏ ဝေယျာဝစ္စကို လုပ်ကိုင် ကူညီပေးသူ ဒကာ တဦးကလည်း သူ၏တာဝန်ကို အထူးကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၈.၉.၂၀၀၇ ရက်နေ့တွင် နအဖ စစ်အစိုးရကို ရဟန်းသံဃာတော်များက မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ကာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးစတင်လိုက်သဖြင့် မြန်မာ့အရေးကို ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအသီးသီး က သိရှိနားလည်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ ကမ္ဘာက သိရှိသွားသည့်အခါ တချို့က နာမည်ခံယူလိုကြသော်လည်း အမှန်မှာ ပြည်သူတို့၏ ရင်တွင်း ခံစား ချက်ကို အရှိအတိုင်း သိရှိနားလည်ကာ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများ ဟန်ချက်ညီညီ လုပ်ဆောင် ခြင်းကြောင့်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Sanghaalliance at 11:49 PM0comments